Iphinde yenqaba namaphuzu iBaroka ibamba iChiefs - Impempe
Iphinde yenqaba namaphuzu iBaroka ibamba iChiefs
January 26, 2021 January 26, 2021 Impempe.com
Baroka FC (0) 1
Mhlawumbe ukucazelana ngamaphuzu wumphumela obubafanele bobabili iKaizer Chiefs neBaroka njengoba besebenze ngokuzikhandla emdlaweni weDStv Premiership obuseFNB Stadium ngoLwesibili.
Azizange zilokhu zithengana njengoba zivele zakhombisana ukungesabani zisuka nje. Bekungumzuzu ka-16 ngesikhathi uNhlanhla Mgaga ezama ukuzuma uDaniel Akpeyi ngembumbulu yebhola ayidonse ekude kodwa wathola ukuthi lo nozinti waseNigeria uphapheme.
UReeve Frosler, obedlala esiswini ophikweni lwesikudla, uthole ithuba ngomzuzu ka-24, kodwa u-Oscarine Masuluke walivimba ibhola lakhe.
YiBakgaga ecishe yavula inkundla ngomzuzu ka-27, kodwa ibhola lika-Ananias Gebhardt abelingqofile laceza kancane phezu kwepali kanti bekubonakala sengathi bekungasekho abesangakwenza u-Akpeyi ukulivimba.
IChiefs isiqale ngesivinini esiphezulu isiwombe sesibili ihlasela iphindelela emapalini eBaroka, kodwa ifice uMasuluke nodonga lwakhe lwasemuva bengafune lutho.
Ngesikhathi iChiefs isihlasela mawala, ibanjwe ngecebo elidala lokuhlaselwa ngokuzuma, uMasuluke elula ibhola elithumela phambili, lafica uThami Masiya olibambe kamnandi wabe eselinamathisela enethini, washiya u-Akpeyi ethetha kodwa kungacaci ulwa nobani.
Sekusele imizuzu engu-20 uphele umdlalo, uLebogang Manyama ushaye ekanokusho iphasi ebheke kuLeonardo Castro ongene ngesiwombe sesibili, kodwa ibhola lalo mgadli waseColombia laphuma eceleni kwepali.
Ukuhlasela kwaMakhosi kugcine kuthelile ngomzuzu ka-76 ngesikhathi uCastro ehudula izitobha zeBaroka engena nazo ebhokisini qede waligoba ibhola, lahlangana noGoodman Mosele walishaya ngakubo, kwaba ngu 1-1.
UCastro ubegcwele ukuzethemba kulo mdlalo kanti ngomzuzu ka-80 uzame ukushaya igoli elikhulu, kodwa ibhola lakhe laceza kancane laphuma eceleni kwamapali.
Previous Previous post: ULorch uthi ubengakile ukuthi usedlale imidlalo engu-100 kwiPremiership
Next Next post: Kuphinde kwaqansa kwiPirates idedela iGalaxy isiyibambe ngobhongwane